Saddex ugu ammaanka badan oo fiican mootooyinka is miisaamid dib loo eego - Jomo Technology Co., Ltd
Hoverboard waxaa soo dhaweeyay dad badan oo ka yar, karaa, sababtoo ah waxay ka heshay xad faraxsan oo ku riyaaqay on fuushan hoverboard, laakiin sida loo doorto ammaan mooto isku dheelli? Haddaba i sii daa aan ku talinaynaa saddex ammaansan oo fiican mooto is miisaamid in aad. Mid ka mid ah hore waa u KOOWHEEL brand Self Balance Board K7 la UL 2272 Certification iyo LG batari smart. The 2 Wheel Self Dheelitirka mooto K7 Bluetooth Laba taayir 8.5inch Good Self Dheelitirka mooto HoverboardTaayirada adag Hummer- keenaya waayo-aragnimo fiican in aad! Waxaa qoreysa technology wax yar ka duwan yahay ka hoverboards kale, u ogolaanin in ay u isticmaalaan matoorrada oo awood badan, giringirihii 8.5inch waa fantastic on wasakh iyo cawska, inkastoo, isagoo aan ahayn buufin, weli waxaad dareemi doontaa wax badan oo gariirka on terrains sinnayn. Ka dib markii maalin dhan ama tuug, waxaan ay awoodaan si ay u helaan 15-20km ah hoverboard this. Its xawaare badan yahay ee saacadiiba 12Km. Waxaa laga yaabaa in ay suurtogal tahay safarka dushiisa kasta oo kor inclines sabab u matoorrada awood badan. Waa iman kara sixir si ay muuqan aad qaadato mid ka mid meel kale, gabi ahaanba caqabad by dabaqa ka badan oo aad u safarto. hoverboard The jawaab u amarradaada fudud iyo waxa aanu qaadan muddo dheer in ay haleelaan.
Kale oo bilaabay KOOWHEEL hoverboard is-dheelli- K5 UL2272 iyo ASTM shahaadooyin la dual Bluetooth iyo nalalka LED. Waxa kale oo uu leeyahay gacanka ee bartamaha, aad u sahlan in ay keenaan. On technology, qaab-dhismeedka qaybsan, fiilooyinka badan ka yar, wax dheeraad ah oo ammaan ah, aad uga hooseeya heerka haleysan yahay (3 kun) oo ka xasilloon. Tani hoverboard is-dheelli- waa nooc gaarka ah ee gaadiidka taas oo laga yaabaa in meel kasta oo magaalada ilaa iyo inta aad batteriga korontada keena inay sii socoto. Iyada oo baaskiil gacmaha-free socday by hawlaha maalin kasta sida shaqada, macalimiinta ama ugu safri kartaa kale ka leexin kara xaq u galeen ku lug a placid iyo qanco.
Koowheel waayadan dambe bilaabay ka mooto korontada marna laabi wax la patent design qabow moodada cusub kaas oo u ogolaanaya in ay ku dhiirigelinayaan in aad u fiican cusub. Its LED screen bandhigay gebi tuso batari iyo xawaaraha. Light laakiin firfircoon.
Guud ahaan, hoverboard Segway ah ayaa looga baahan yahay ammaan ku eego horumarka tiknoolijiyada iyo wakhtiyada firaaqada ah. Ugu dambayn warbixinta caanka in Segway waxaa laga yaabaa in la kulmo iyo baahi dhaqdhaqaaqa badan suuqa ballaaran, fududeeyo laga yaabaa in ay suuqa kala iibsiga noocyada kala duwan ee gaadiidka, oo aad u adeegtaan bedel baabuurta.